Tingmebi Isi Ọwụwa: Ihe Mere Fordị Ntanetị Na-enyere Gị Aka Tụọ ROI gị | Martech Zone
Ndị nwere ego nwere ike ịlele ROI na ezigbo oge. Ha na-azụta ngwaahịa, ma na-elele ọnụ ahịa ngwaahịa ahụ n'oge ọ bụla, ha nwere ike ịmata ozugbo ma ọnụego ROI dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma.
A sị na ọ dịịrị ndị ahịa ahụ mfe.
Atụ ROI bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mkpa n'ịzụ ahịa. N'ezie, ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị siri ike anyị na-eche ihu kwa ụbọchị. Site na data niile na-agbanye n'ọtụtụ isi, ọ kwesịrị ịbụ usoro kwụ ọtọ. A sị ka e kwuwe, a gwala anyị na anyị nwere data karịa mgbe ọ bụla ọzọ na anyị na-eji ihe kachasị mma nchịkọta ngwaọrụ. Agbanyeghị, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị na-enweta ọtụtụ data ma ọ bụrụ na ezughi oke na ezighi ezi.
Ọ baghị uru etu sọftụwia nyocha gị siri dị ukwuu ma ọ bụ sie ike, ọ dị mma dị ka data ọ na-enweta. Ọ dị oke mfe ịme mkpebi na-ezighi ezi dabere na data na-ezighi ezi. Na mgbakwunye, ọ nwere ike isiri gị ike ịmata ihe ndị na-eme ka ịzụta zụrụ. Mgbe ụfọdụ, iji omume ziri ezi atụ atụ ndị ahịa nwere ike ịdị ka ịnwa iji ntụ kpọgide ahụ na mgbidi. Yabụ kedu ihe ị ga - eme iji jide n'aka na ị na - enweta data kwesịrị ekwesị?
Jiri Mpempe Akwụkwọ
Formsdị ntanetị bụ ngwá ọrụ dị ike ebe ọ bụ na ha nwere ike jupụta ebe ọ bụla, gụnyere site na smartphones, mbadamba ma ọ bụ kọmputa. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị na-arụ ọrụ na-aga n'ihu, yabụ ị kwesịrị. Ọdịdị dị elu nke nhazi na mgbanwe pụtara na ị nwere ike ịmepụta ụdị nke na-enyere aka ịnye nsonaazụ ịchọrọ, dị ka ọgbọ ndu, nyocha na ụdị nzaghachi, na ndebanye aha ihe omume. Ọ bụrụ naanị na ịchọrọ aha na adreesị ozi-e, ị nwere ike ịmepụta ụdị kọntaktị dị mfe nke na-eme ya. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na mkpa gị dịtụkwuo elu, dị ka ngwa ọrụ, ị nwekwara ike ime nke ahụ.
JotForm bụ onye dị mfe iji rụọ ụdị:
Kpachara anya maka iji ụdị igwe eji ekpo ọkụ nke gụnyere web ma ọ bụ ọrụ e-commerce gị ebe ọ bụ na ndị a na-agụnyekarị mpaghara data dị oke mkpa, nke na-apụtakarị na ị na-eme mwepụ na data ị na-anakọta. Dịka onye okike, ị maara data akọwapụtara nke ịchọrọ iji mee mkpebi dị mkpa, nke pụtara ịnwe nhọrọ iji hazie ụdị iji kwekọọ na njirisi gị bụ ozi dị oke mkpa.
Kọwaa data gị
Onlinedị dị n'ịntanetị na-enye gị ezigbo ngwaọrụ iji kpokọta data kachasị mkpa gị, ma jụọ ya n'ụzọ ga-enyere gị aka. Fọdụ data ị chọrọ bụ ihe amanyere bụ iwu, yabụ ịkwesịrị ịkọwa mpaghara ụfọdụ dị ka achọrọ tupu etinye akwụkwọ. Nke a na - egbochi gị ịnata ozi ele mmadụ anya n'ihu na ịnwe mmekọrịta nzuzu na azụ na ntanetị na ndị ahịa iji nweta ya, nke na - eduga na ire ere furu efu. Ezigbo onye na-enye ụdị ntanetị na-enye gị ọkwa njikwa a.
Tụkwasị na nke a, ịnwere ike ịgba mbọ hụ na ekwesịrị ịnye data n'ụdị ziri ezi, dịka itinye koodu mpaghara na nọmba ekwentị, ma ọ bụ na adreesị ozi-e nwere akara @ ma ọ bụ tinye .com, .net ma ọ bụ .org, wdg, suffix kwesịrị ekwesị. . Ihe mere i ji chọọ ime nke a bụ iji hụ na iguzosi ike n’ezi ihe nke data ahụ. Ọ bụrụ na ị hapụ ndị ọrụ ka ha pịnye ha data n'ụzọ na-enweghị nsogbu, nsonaazụ gị nwere ike bụrụ ihe na-ezighi ezi, nke ahụ mekwara nzube nke iji ụdị ntanetị.
Ejila Ajụjụ Ndị Ahịa Jiri Ajụjụ Na-abaghị Uru
Otu n'ime mmejọ kachasị ndị mmadụ nwere n'ụdị ntanetị bụ igosipụta mpaghara data ọ bụla, nke nwere ike ime ka ụdị dị ogologo ma bụrụ nke siri ike. Nke a na - eme ka ndị ọbịa hapụ ụdị gị tupu ọ bido n’ihi na ọ dị ka iwe nnukwu oge iji mezuo ya.
Ọ ka dị irè karịa itinye usoro arụmụka. Nke a pụtara na ọ bụrụ na onye ahịa nye azịza a kapịrị ọnụ, ọ ga-emepe usoro data ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụdị ahụ gụnyere ajụjụ, dị ka, Nke a ọ bụ oge mbụ ị na-azụ ngwaahịa anyị?, enwere ike ịza dịka "ee" ma ọ bụ "mba". Nzaghachi ee nwere ike imeghe usoro ọhụrụ nke ajụjụ na-ajụ otu onye ahịa si mụta banyere ngwaahịa gị, ha ga-akwado ya yana ogologo oge ka ha nyochara tupu ịzụta. Ọ bụrụ na nzaghachi bụ mba, ọ na-emepe a iche iche nke ajụjụ.
JotForm'Ọnọdụ ọnọdụ anyị:
Ojiji nke mgbagha ọnọdụ pụtara na ndị ahịa ga-ahụ ma zaghachi ajụjụ metụtara ha, na ịghara ịhapụ usoro ajụjụ ndị na-adịghị mkpa. Nke a na - abawanye nzaghachi nzaghachi ma na - emeziwanye azịza ya ebe ọ bụ na ndị ahịa anaghị eche na ha kpaliri ịza ajụjụ ọ bụla, ma ọ metụtara ha ma ọ bụ.
Mgbe etinyere ụdị ntanetị, data nwere ike ibugharị n'otu ntabi anya na nyocha gị nke nhọrọ, ma ọ bụrụ na ọ bụ mpempe akwụkwọ ma ọ bụ sọftụwia CRM dị egwu. Ebe ọ bụ na ozi a bụ oge na ụbọchị zọọ, ị nwere ike nyochaa ya n'oge. Na mgbakwunye, ebe a na-ejide mpaghara data ọ bụla n'otu n'otu, ịnwere ike inyocha ihe ọmụma ahụ site na obere granular larịị ruo ọkwa kachasị elu. Nke a pụtara na ị nwere ike nyochaa mkpọsa ahịa gị ka ọ na-eme, na nkọwa zuru oke, ma mee mgbanwe dịka ọ dị mkpa.
JotForm 's nchịkọta:
Inweta Miri Omimi
Ebe ọ bụ na ụdị ntanetị nwere ike ịbụ ihe nchịkọta data njedebe maka mmekọrịta ndị ahịa, gụnyere ajụjụ nkwado na iwu ịntanetị, ị nwere ike ịmụ akụkọ ihe mere eme na ụlọ ọrụ gị. You'll ga-amata oge ole ndị ahịa na-enye iwu maka ngwaahịa gị, ma ọ bụ ugboro ole enwere nkwado na nkwado, yana ụdị ajụjụ a jụrụ. Uru ị ga - enweta na ọkwa data a bụ na ị nwere ike nyochaa ya site n'ọtụtụ dị iche iche, ma chọọ ụkpụrụ ma dozie obere nsogbu tupu ha abụrụ nnukwu isi ọwụwa. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọpụta na site na ịhapụ akara ngwaahịa ọhụrụ, ị na-enweta ọtụtụ ajụjụ gbasara mbupu mba ofesi, yabụ ị nwere ike chọọ imelite ozi mbupu gị na / ma ọ bụ mee ka ọ pụta ìhè na weebụsaịtị gị.
I nwekwara ike iji data iji mụọ usoro ịzụrụ ma ghọta nke ndị ahịa na-azụta ngwaahịa gị oge niile na ụbọchị izipu gị. Nke a nwere ike iduga ịmepụta ụlọ ahịa ndị na-azụ ahịa oge niile na nyocha ọhụụ pụrụ iche ma ọ bụ windo ịzụta oge maka ndị ahịa gị kacha eguzosi ike n'ihe. Ikike micro-market nye ndị ahịa gị enweghị njedebe, ọ bụrụhaala na ị nwere data ziri ezi iji nyere aka ịmepụta atụmatụ ahụ.
Formsdị ntanetị na-enye ike dị ukwuu na ike mgbanwe. Nke a pụtara na ị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa iji kpokọta data ziri ezi ịchọrọ ịme mkpebi azụmahịa. Na mgbakwunye, ị nwere ike iwulite ma tinye ụdị ndị a na nkeji ole na ole, nke pụtara na ị nwere ike nyochaa ROI gị ọsọ ọsọ.
Tags: ahịa ụdịụdị nchịkọtaụdị onye na-ewu ụlọụdị mmechaụdị dataụdị ubiụdị ajụjụformsJotFormonye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetịụdị dị n'ịntanetị